Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Ac Milan Oo Ku Dhow Saxiixa Xidig Chelsea Ka Tirsan, Xaalka Paul Pogba Iyo Qodobo Kale Oo Xiiso Leh
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Ac Milan oo ku dhow Saxiixa Xidig Chelsea ka tirsan, Xaalka Paul Pogba iyo Qodobo kale oo Xiiso leh
August 22, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
David Beckham ayaa Lionel Messi kala hadlay sidii uu ugu biiri lahaa Inter Miami marka uu 34 jirka weerarka uga ciyaara xulka Argentina heshiiskiisa PSG dhaco 2023. (Mirror)
Xiddiga qadka dhexe ee West Ham iyo xulka England Declan Rice, oo 22 jir ah, ayaan ku faraxsanayn qiimaha £ 100m ee ay kooxdu dul saartay isaga, taas oo si wax ku ool ah u qiimaysay in uusan ka dhaqaaqin xagaagan. (Sunday Telegraph)
AC Milan ayaa dooneysa inay lasoo wareegto xiddiga qadka dhexe ee Manchester City iyo Portugal Bernardo Silva, oo 27 -jir ah, kaasoo ku kacaya £ 45m. (DailyStar)
Fiorentina Weeraryahankeeda ee 21-sano jirka ah Dusan Vlahovic waa Tottenham diirada u saaran haddii Harry Kane ka tago xagaagan. (La Repubblica)
Tottenham ayaa diiday heshiis is dhaafsi ah oo uu ku lug lahaa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Bayern Munich Corentin Tolisso, oo 27 jir ah, kaas oo ka dhigi lahaa xiddiga qadka dhexe ee reer France Tanguy Ndombele, oo 24 jir ah, inuu ku biiro kooxda Bundesliga. (Sky Sport Germany)
Ndombele ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo Real Madrid , Barcelona ama Bayern Munich . (AS)
Madaxa suuqa kala iibsiga ee Tottenham Fabio Paratici ayaa wadahadalo la furay Juventus si uu ugu dhaqaaqo Ndombele, heshiis is dhaafsi ah oo ka dhigaya xiddiga qadka dhexe ee Mareykanka Weston McKennie, 22, inuu ku biiro kooxda waqooyiga London. (Tuttosport – af Talyaani)
Everton ayaa kula biirtay Bologna iyo Eintracht Frankfurt loolanka loogu jiro saxiixa daafaca reer France Malang Sarr, oo 22 jir ah, kana tirsan Chelsea . (Gianluca Di Marzo )
Chelsea ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo xiddiga qadka dhexe ee Monaco Aurelien Tchouameni, oo 21 jir ah. (90min)
Manchester United ayaa weli xiiseyneysa xidiga reer Wolves iyo 24 jirka qadka dhexe ee Portugal Ruben Neves. (Sunday Express)
Tababaraha Paris St-Germain Mauricio Pochettino ayaa diiday inuu meesha ka saaro inuu u dhaqaaqayo xiddiga qadka dhexe ee Manchester United iyo France Paul Pogba oo 28 jir ah (Manchester Evening News)
Newcastle ayaa wadahadalo la yeelan doonta Everton si ay ugu dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Colombia James Rodriguez, oo 30 jir ah, codsi ka yimid tababare Steve Bruce. (Calcio In Pillole)
AC Milan ayaa ku dhow inay dhameystirto heshiiska ciyaaryahanka qadka dhexe ee Chelsea Tiemoue Bakayoko, 27 -jir ah (Calciomercato)
Manchester City ayaa si aad ah u dooneysa xiddiga qadka dhexe ee Barcelona ee reer Spain Ilaix Moriba, laakiin waa haddii ay si xor ah kula soo saxiixan karaan 18 jirkaan. (Mundo Deportivo)
Anderlecht ayaa ka shaqeyneysa heshiis ay kula soo saxiixaneyso xiddiga qadka dhexe ee Manchester City Liam Delap, oo 18 jir ah. (FootballInsider)
Daaficii hore ee Arsenal iyo Chelsea David Luiz oo 34 jir ah ayaa diirada u saaran Flamengo . Xiddiga reer Brazil ayaa ah wakiil xor ah ka dib markii uu ka tagay Arsenal dhamaadka qandaraaskiisa xagaagan. (TheSun)
Burnley ayaa kula tartami doonta Crystal Palace baacsiga ay ugu jirto xiddiga qadka dhexe ee Watford Will Hughes oo 26 jir ah (Mail on Sunday)
Southampton ayaa rajeyneysa inay dhameystirto heshiis qiimo jaban ah oo ay kula soo wareegeyso xiddiga qadka dhexe ee kooxda Celtic iyo xulka Scotland Ryan Christie, oo 26 jir ah, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo bisha Janaayo. Thesun)